Indoda nomfazi, kwintlalo yanamhlanje, baqhelana nezindlela zokukhusela, kodwa yintoni enokuyenza kwimeko echaseneyo, xa isibini sifuna ukuba nabantwana xa kukho into engasebenzi. Musa ukwethuka kwaye ugijimele kugqirha. Kumele kukhunjulwe ukuba umntu uyinxalenye yendalo kwaye ngaloo ndlela "i-insured" ukusuka kwindalo engabonakaliyo.
Ukuba indoda nomfazi baphilile, ixesha elide elilindelekileyo liya kuza. Mhlawumbi isibini esingazi kakuhle indlela yokulala ngesondo ukuze ukhulelwe.
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza into ethile, kufuneka ufumane ezinye iinkqubo zomzimba. Qala ikhalenda apho uya kubhiyozela imihla yokuhamba kwimihla. Oku kusinika ntoni? Uya kubona ngokucacileyo ukuba yiyiphi intsuku ongeyinyumba, kwaye xa ukhulelwe. Iintsuku ezikhethiweyo ziya kuba ngomhla we-12-16 womjikelezo, xa kuqhuma i-ovulation. Eminye imihla loo ntokazi isondele. Omnye kufuneka aqwalasele enye ingongoma. I-Spermatozoa ifanelekile iintsuku ezingama-2-3. Ixesha lexesha eliyimfuneko, xa isidoda sinokuhlangana neqanda, iintsuku eziyi-3-4. Ixesha le-ovulation lingabalwa kuphela ngeendlela zekhalenda, ungasebenzisa ityati yokushisa, kodwa ukuba awulinganisi ngokuchanekileyo, akunakukunceda. Ekuqalekeni kwe-ovulation "kuya kululeka" umzimba wakho. Ukuba uvakalelwa ukwanda kwezesondo kwaye ukhupha iintlungu kwisisu esisisiswini, ke ixesha.
Ukuphendula umbuzo othi: "Indlela yokulala ngesondo ukuze ukhulelwe", kufuneka uhlaziye ubudlelwane bezesondo kunye nendlela yokuphila yesiqabane esincinane. Ingqungquthela esishukumisayo yobomi, uxinzelelo, ithathele umzimba. Ngoko, ukufumana ixesha elide elindelwe "amabini amabini", kufuneka uhlaziye ishedyuli yomsebenzi kunye nokuphumla.
Ekuqaleni, umfazi uthatha i-contraceptive ukukhusela ukukhulelwa okungafunekiyo, okokuba, nangona "luncedo", luchaphazela kakubi iinkqubo zendalo, i microflora yangaphakathi, utshintsho oluchaphazela "ubunzima" be-spermatozoa. Ukuze i-organism ihlaziywe kumjikelezo oqhelekileyo, kuthatha ixesha.
Ukuze uqikelele ngokuchanekileyo, kufuneka ukhuphe ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwazo zonke iintlobo ze-gels ezithandanayo, iiprafu kunye nezinye "i-chemistry" eziza kutshabalalisa umdaka. Qaphela malunga nokukhethwa kwee-gaskets, zama ukungasebenzisi izinto ezikhethiweyo.
Enye yeendlela "zikagogo" ezicetyiswayo zeluleka isibini esithile ukuba sithandane ngesondo, kwisithuba "somntu esiphezulu", ukubeka umcamelo omncinci okanye umqulu phantsi kwamacandelo omlingane. Ngaloo ndlela, umthamo othile womzimba uyadalwa, kwaye umdweliso ungena kakuhle kumzimba wesetyhini kwaye uhlala khona ixesha elide, okwandisa kakhulu amathuba okukhulelwa. Kwakhona musa ukukhawuleza emva kokuqhagamshelana ukuya kwibhedi. Umphumo onobungozi we "chemistry" sele ukhankanywe ngasentla. Kubaluleke kakhulu i-orgasm yebhinqa. Ukuba kufike phambi kwendoda, amathuba akho aphakamileyo kakhulu. Ukukhulelwa, ungalalani ngesondo imihla ngemihla, ukusuka kule nxeba ukwandisa inani le-sperm engenakho. Khumbula ukuba umzimba ufanele unike ukuphumla okuncinci, ukuze abe nexesha lokuqokelela amandla.
Ukuba uthatha isigqibo sokuba nomntwana kunoma yiyiphi intengo, isondo akufanele siphendule sibe yinto enyanzelekileyo. Yenza xa uthanda, ngaphandle koko iya kuba "umsebenzi wentsapho" kwaye uyayeka ukukholisa bobabini. Ukuziyeka ixesha elide akusayi kudibanisa inombolo ye-spermatozoa, ngokuchaseneyo, umgangatho wesilisa uya kuncipha.
Kwanele ukulala ngesithathu ngeveki, ngoko ungaphuthelwa iintsuku ezinokubamba, kwaye iqabane lakho liya kuba nexesha lokuphumla nokufumana amandla.
Indlela yokubonakalisa ubulili?
Ukuxubha okanye ukunyuka kwesifazana
Indlela yokuba yindoda endoda
Ukukhanyiswa kweengcebiso zeenwele -iphotos, amagama kunye neempawu zengcali
Izicelo zokukhusela izithintelo: ukuhlolwa kunye nemiyalelo yokusetyenziswa
Iziseko ezisisiseko zokutya utyhefu
Indlela yokupheka ioli ye-buckthorn yeoli ekhaya